Andro mozika an-dalambe: Fampisehoana an-jatony maro any Vilnius, Litoania
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Andro mozika an-dalambe: Fampisehoana an-jatony maro any Vilnius, Litoania
Te hampiditra feon-kira mivantana ve ianao amin'ny fitsaharan'ny tanàna amin'ny faran'ny herinandro? Hamarino tsara fa ao Vilnius ianao amin'ny 19 Mey ary mahita mozika vitsivitsy izay hikorontana ny rantsan-tongotrao amin'ny Andro Music Street isan-taona amin'ity taona ity. Ny talenta mibontsina sy ny tarika efa niorina teo an-toerana tamin'ny fomba rehetra eritreretina dia efa naneho ny fahaizany mba hanolotra ny seho tsara indrindra vitany mandritra ny kaonseritra malalaka an-jatony malalaka kasaina hatao mandritra ny tontolo andro.
Street Music Day dia nankalaza ny fanahin'ny mozika maimaim-poana nandritra ny 12 taona izao, ary nahasarika mpankafy marobe sy mpanakanto maro isaky ny fanontana. Natomboka tamin'ny taona 2007 ny mpanakanto litoanianina malaza Andrius Mamontovas ho fandraisana andraikitra kely dia niely vetivety tany amin'ny tanàna hafa ary hatramin'ny vondrom-piarahamonina litoanianina any ivelany aza ny festival, nampivondrona mpandray anjara 5,000.
Ny fahombiazan'ny Street Music Day dia ny tontolon'ny fahalalahany. Afaka mamoy tena amin'ny fihainoana ny fampisehoana ianao na mandeha fotsiny ary milentika amin'ny fiainana an-dalambe mamorona. Fitsaboana samirery ny fizahana ny araben'i Vilnius sy ny vohikalan'ny UNESCO World Heritage sites, saingy ny mozika mivantana no mampiavaka azy bebe kokoa.
Raha tsy mino an'io ianao dia makà hira mampalahelo, ary ahatsarao. Raiso ny amponga - azonao atao ny manamarina ny politikam-pitateran'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka - ary midira amin'ny fitohanana Drum2ught eny an-dalamben'i Vilnius. Na misasasasa tsotra fotsiny ao amin'ny iray amin'ireo kafe any ivelany ary mitsentsitra ny tontolon'ny zavakanto. Azo antoka ny tantara Instagram mahafinaritra!
Ny minisitry ny fizahan-tany any Indonezia dia mahita ny mety ho azo avy any India
Ankara dia mandray ny kaongresy erantany UIC eran-tany amin'ny Rail Speed ​​High